Ekoatora: Manadihady Ny Tatitra Nataon’ny Kaomisiona Misahana Ny Fahamarinana Ireo Blaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jolay 2018 13:18 GMT
Tamin'ny May 2017, najoro tao Ekoatora araka ny didim-panjakana ny kaomisiona iray misahana ny Fahamarinana mba hanadihady sy hamory ireo vaovao mikasika an'ireo fanitsakitsahana zon'olombelona izay naha-tomponandraikitra ny polisy sy ny tafika tao anatin'ireo taona 25 lasa. Ny 7 May lasa teo, taorian'ny 3 taona nijoroany, nanolotra ny tatitra nataony tamin'ny Filoha Rafael Correa ilay Kaomisiôna misahana ny Fahamarinana. 831 no isan'ireo nofaritany tamin'ireo 456 niharan'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, teo anelanelan'ny 1984 sy 2008. Manadihady an'io tatitra io aminà zoro samihafa ireo blaogera.
Niaiky ny Filoha Correa hoe nametraka olana vitsivitsy ny herisetra nisy teo amin'ny fitantanany, saingy nilaza tamin'ny polisy sy ny tafika izy fa tsy voatery hankato an'ireo baiko akory ireo olona ao aminy, baiko izay mety mifanohitra amin'ny zon'olombelona. Araka ny lalàna, hisy fanadihadiana savaravina hatomboka mialohan'ny tena fanadihadiana, hoy ny voalazan'ny Mpampanoa Lalàna, Washington Pesantez. Hametraka amin'ny toerany an'ireo andiana mpampanoa lalàna manokana sy tarika iray mpanao fanadihadiana ny Fanjakana mba hanadihadiana an'ireo heloka bevava navoitra ao anaty tatitra.
Ny ankamaroan'ireo fandikandalàna fantatra (68%) dia notontosaina fony mbola teo amin'ny fitondrana ny governemanta mpifikitra ami'ny nentindrazana, Leon Febres Cordero [ang] (1984-1988). Nanoratra tamin'ny blaogy Memory in Latin America [ang] i Lillie Langtry fa very hevitra izy amin'ity “lazaina fa kaomisiôna misahana ny Fahamarinana” ity [ang] izay resahan'ny Associated Press. Saingy ataony bango tokana ihany koa ireo hevi-dehibe ao amin'ity tatitra ity:
Milaza ilay parlemantera, Maria Paula Romo, fa ity tatitra ity dia tsy mbola azo rassina ho fanapahankevitry ny fitsaràna, fa fotsiny fanangonana ireo vaovao sy angona mikasika ny ampahany amin'ny tantaran'i Ekoatora kosa. Izay tsy voalazany dia ny hoe ilay Kaomisiôna misahana ny Fahamarinana dia afaka nanatontosa tsara ny asany noho ny fiarahamiasan'ny tafika sy ny Filankevim-piarovana ao Etazonia, izay nanome tahirin-kevitra tsy latsaky ny 30 000 pejy ho an'ilay Kaomisiôna, sy ny Polisy Nasionaly ao Ekoatora koa, izay nandray anjara tamin'ny fanomezana pejy 250 000 hafa izay hatreo dia nijanona ho tsiambaratelon'ny Fanjakana.
Kanefa, mametra-panontaniana momba io tatitra io ireo vahoaka ao Ekoatora. Ny blaogera Victor Vizcaino ao amin'ny La plegaria de un pagano mitanisa ny filohan'ny polisy teo aloha, ny jeneraly Edgar Vaca, izay mandà ho tsy nampijaly na iza na iza, ary milaza fa teo “ambany tsindry” no nanoratana ilay tatitra, ary ny fanadihadiana ataon'ny polisy mikasika ireo raharaha heloka bevava dia dingana ara-teknika ary ny fakàna am-bavany tsy midika ho fampijaliana.
Ampian'ilay blaogera amin'ny hoe misy fahasamihafana io amin'ireo kaomisiôna mitovy aminy napetraka any amin'ireo firenena hafa. Raha izay, araka ny voalazany, mitady ny hahazo be ireo vondrona sasantsasany: hahazo tamby 50 000 dolara ireo mpiady anaty akata fahiny toa an-dry Alfaro Vive Varajo [ang] sy i Montoneras Patria Libre, napetraka ho toy ny fenitra amin'ny fanonerana, mba hanadinoina ny fikasan'izy ireo hanenjika ny Fanjakana sy hangataka dolara an-tapitrisany.
Mieritreritra ihany koa ny blaogera, Saulo Ariel avy ao amin'ny La cueva de Saulo, hoe mitongilana ilay tatitra sady manoratra ny antony tsy maintsy nananganana io kaomisiôna io taorian'ny fiafaran'ny fitondran'ny Filoha Correa. Ny Kaomisiôna misahana ny Fahamarinana an'i Correa, arak'i Saulo, dia tsy mitady afa-tsy ny hampibaribary ny marina avy amin-dry zareo fa tsy ny tena fahamarinana araka ny tokony ho izy. Mampieritreritra azy ny fahamendrehan'i Elisie Monge, filohan'ilay kaomisiôna, :
Guillermo Sornoza ao amin'ny blaogy El Ecuador de Hoy dia tsy mpomba an'i Correa velively, saingy mihevitra izy fa noho io “herisetra ataon'ny Fanjakana” io no tsy iroboroboan'ny heloka bevava ao Ekoatora :